थाईल्याण्डकी राजकुमारी निर्वाचनका लागि अयोग्य ! - अन्तर्राष्ट्रिय - Radio Kantipur
थाईल्याण्डकी राजकुमारी निर्वाचनका लागि अयोग्य !
- आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरेकी थाइल्याण्डकी राजकुमारी उबोरत्न राजाकन्या सिरिभाधना बर्नाभाडीलाई निर्वाचन समितिले अयोग्य ठहर गरेको छ ।
राजसंस्था राजनीतिभन्दा माथि हुने भन्दै निर्वाचन समितिले उनलाई अयोग्य ठहर गरेको हो । त्यहाँको निर्वाचन आयोगले आज वर्तमान राजाकी दिदी बर्नाभाडीको नामविनै उम्मेद्वारहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै राज परिवार र राजसंस्था राजनीतिभन्दा माथि रहने र राजनीतिमा तटस्थ रहनुपर्ने भएकाले बर्नाभाडीलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन नसक्ने जनाएको छ । राजकुमारीले थाई रक्सा चार्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वारी घोषणा गरेकी थिईन् ।
सो पार्टीलाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै चुनावी अभियानमा राजसंस्थाको प्रयोग गरको आरोप लागेको छ । थाईल्याण्डमा सन् २०१४ मा भएको सैन्य कू पछि पहिलोपटक आगामी मार्च २४ मा निर्वाचन हुँदैछ ।